Orinasa madinika sy salantsalany Mila tosika mafy, hoy ireo mpisehatra
Ho tontosaina etsy amin’ny Carlton Anosy rahampitso sy rahafakampitso ny hetsika “Salon PME et Startups” na ny varotra fampirantiana momba ny orinasa madinika sy salantsalany mba hahafahana manokatra bebe kokoa ny seham-pivelaran’izy ireo, raha ny fanazavana, tetsy Antsakaviro omaly.
Araka izany dia hisy ny varotra sy fampahafantarana ireo mpandray anjara manodidina ny 50 isa. Ankoatr’izay dia hisy koa ny fifampizarana traikefa ho fanapiana ireo mpandraharaha tsirairay sy ny orinasany avy ary velan-kevitra hametrahana ny politika tokony hitondrana izay tontolon’ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika izay, araka ny fanazavan’ny mpikarakara. Tsy ampy tosika, hoy ny tenany ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika ka tery ny lalam-barony. Be ny olana ara-bola satria dia maro ireo orinasa tsy ara-dalana raha toa ka miisa 3000 ireo ara-dalana. Na resaka fambolena sy fiompiana na teknolojia na dokambarotra sy ny hafa marobe dia ho hita eny an-toerana avokoa, hoy hatrany ny mpikarakara.